WARBIXIN: RW Abi Axmad oo faragalin ba'an ku haya siyaasada gudaha ee DDS Itoobiya
WARBIXIN: RW Abiy Axmad oo faragalin ba'an ku haya siyaasada gudaha ee DDS Itoobiya
JIGAJIGA - Tan iyo intii dowlada Federaalka Itoobiya awooda ku baadashay maamulkii DDSI waxaa kordhaya khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya siyaasiyiinta hogaamisa xisbiga talada haya ee mamaulkaas kuwaas qaarkood gacansaar dhow la leeyihiin Ra'isal wasaare Abiy Axmad.
Kulan asbuucaan gudihiisa ay isugu yimaadeen qaar ka tirsan xubnaha xisbiga talada haya ee dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya kaas oo uu shir gudoominayey Madaxweyne ku xigeenka Axmad Faarax ayaa gashaanka loogu daruurey hadal dhowaan kasoo yeerey Ra'isal wasaaraha dalkaas Abiy Axamad.
Ra'isal wasaare Abiy Axamad ayaa dhowaan kulan uu u qabtey madaxda maamulka dowlad degaanka ku sheegey in xisbiga talada haya DDSI [ dowlad degaanka Soomaaliya] uusan waqtigaan u baahneyn iney shirweyne qabtaan madaama isbadaladii loo baahnaa horey loo sameeyey kuwaas saraakiishii hogaamin jirtey xisbigaan qaarna la xirey halka kuwa kalena shaqada laga eryey.
Kulanka uu shir gudoominayey Madaxweyne ku xigeenka maamulkaas ayaa waxaa kasoo baxay in xisbiga talada haya ee dowlad degaanka uusan hadalka Abiy Axamad kasoo yeerey aysan la qabin islamrkaana qabanyaan shirweyne muddo 20 ciso kaasoo ay ku soo dhisi doonaan gole dhexe iyo golle fulineed.
Khilaafkaan soo kordhaya ayaa salka ku haya is-fahan-waaga siyaasdeed ee u dhexeeya Madaxweynaha maamulka dowlada degaanka Soomaalida Musatafe Maxamad Cumar (Cagjar) iyo gudoomiyaha xisbiga DDSI ka arimiya Axmad Shide. Axmad Shide ayaa ah sidoo kale Wasiirka maaliyada dowlada Federaalka Itoobiya waxaana uu gacansaar dhow la leeyahay Ra'isal wasaare Abiy Axmad.
Murankaan u dhexeeya labada dhinac waxaa uu saameyn ku yeeshey wadashaqeynta Madaxweyne Cagjar iyo dowlada Federaalka. Mustafe Cagjar ayaa dhowaan booqasho ku tagey gobolo ka tirsan maamulkiisa isagoo arinkaas ku soo beegey xilli magaalada Jigjiga booqasho ku yimaadeen wafdi ka socda dowlada Federaalka.
Mustafa Cagjar iyo xulafadiisa siyaasada ee xisbiga talada maamul degaanka haya, kuwaaas oo uu kamid yahay Madaxweyne ku xigeenka Axmad Faarax ayaa damacsan in in shirweynaha ay damacsan yihiin iney qabtaan hoos ugu dhigaan awooda Axmad Shide ama ku badalaan gabi ahaantiisa.
Ra'isal wasaare Abiy Axmad oo ka soo jeeda qowmiyada Oromada ayaa tan iyo intii xilka uu qabtey waxaa uu faragalin ku hayay arimaha gudaha dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya isagoo siyaasiyiinta hogaamisa mamaulkaas cadaadis joogta ah ku saara iney ka amar-qaataan dowlada Federaalka ah.
Axmad Cagjar oo ah nin ka shaqeyn jirey hay'daha samafalka islamarkaana mucaarad ku ahaa dowladii uu madaxda ka ahaa Cabdi Ileey ayaa dadka la socda siyaasada gobolka waxay ku timaamaan inuu yahay nin ku adag mabaa'diida siyaasadeed ee uu aaminsan yahay taas oo aan farxad galin madaxda dowlada Federaalka Itoobiya kuwaas oo uu ugu horeeya RW Abiy Axmad.
GAROWE ONLINE: Xuquuqda way dhowran tahay.
Xiisad siyaasadeed oo ka taagan Dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya
Afrika 24.01.2019. 12:11